Location: musha » Kutumira » Quick News » Global Travel Trends muAsia-Pacific
Kurerutsirwa kwezvirambidzo zvekufamba munzvimbo yese yeAsia-Pacific (APAC) kwakonzera kuwedzera kwakajeka kwekuchengetedza, maererano neTrip.com data. Kunyangwe kutangazve kwechikamu cheAsia chekufamba uye kushanya kuchisiyana pamusika, zviratidzo zvinokurudzira zvekudzokororwa zviri kutanga kubuda, sezvo zvirambidzo zvadzikiswa uye miganhu ichivhurwa mudunhu rese.
Chirevo chechangobva kuitika kubva kuPacific Asia Travel Association (PATA) yakaratidza kuti vashanyi vepasirese vanosvika muAsia vachakura ne100% pakati pa2022 na2023, sezvo kudiwa kunokwira kusati kwadzokera kune yakajairika mazinga nekufamba kwenguva. Nhamba dzichangoburwa kubva zvirokwazvo dzinotsigira fungidziro iyi. Kubva Kubvumbi 1 kusvika Chivabvu 5, mirairo yakazara yakaitwa pawebhusaiti mudunhu reAPAC yakakura ne54% gore-pagore, kuwedzera kwakakosha pahuwandu hwaKurume (hunoratidza kuwedzera kwe22% gore-pagore).
Nekuongorora nhamba dzichangoburwa, zviri pachena kuti kuwedzera kuvimba kwevatengi kuri kudzoka zvishoma nezvishoma kuchikamu ichi, nemisika mizhinji yeAsia ichiona kuwedzera kuchangobva kuitika mukubhukidza.
Thailand: Mabhuku Anowedzera Mberi Kwemwaka Wakakwirira
Thailand inoenderera mberi nekubvisa zvimwe zvirambidzo zvekufamba. Kubva muna Chivabvu, nyika haichada vashanyi vekunze vakabaiwa zvizere kuti vatore bvunzo dzeCCIDID-19 vasati vabhururuka, kana pakusvika.
Sezvo zvirambidzo zviri nyore, kubhukidza kuri kuwedzera. Kwemwedzi waKubvumbi, kubhuka kwese (kusanganisira ndege, pekugara, kuroja mota uye matikiti/kushanya) kwakakwira ne85% gore negore panzvimbo yeThailand yekambani. Kubhuka kwendege kwakazvimirira kwakawedzera ne73% gore negore, nekubhuka kwepekugara kwakakwira zvakanyanya, pa130% gore negore.
NeChishanu Kubvumbi 22, zuva iro Thailand yakazivisa kuti bvunzo dzeCCIDID-19 kubva kune vafambi vakazara vachipinda mukati hazvichadikanwa, huwandu hwevashandisi vanoona mahotera emunyika yacho hwakawedzera ne29% (zvichienzaniswa nenhamba dzeChishanu chapfuura), nepo vekumba. kubhuka kwendege kwakawedzera neinosvika 20%.
Sekureva kwazvino mishumo, Tourism Authority yeThailand inotarisira kukwezva vafambi vanopfuura miriyoni pamwedzi mukati memwaka wayo uri kuuya, nevashanyi vanokurudzirwa kuzviitira bvunzo dzeantigen panguva yekugara kwavo kwete kugara vari vega muhotera. Muna Kubvumbi, kushanya kwemukati kuThailand kwakauya kubva kuSouth Korea, Singapore, neCambodia nekukwira kwevatengi kubva kure kunotarisirwa mumwedzi iri kuuya.
Hong Kong: Kushanya Kwemunharaunda Kunotangazve
Ipo Hong Kong nguva pfupi yadarika yakasangana nedenda rechishanu, izvi zvakaramba zvichidzika muna Kubvumbi, nekushanya kwakawanda kwenzvimbo kunotangazve muguta uye zvirambidzo zvekusarudzika zvichidzikira.
Vagari vemuHong Kong vakamirira nechido kudzokera kuhupenyu hwakajairika, nemabhichi nemadziva ekushambira zvichavhurwazve muna Chivabvu 5, nemabhawa, makirabhu ehusiku, makamuri ekaraoke uye rwendo rwekufamba zvakare kutangazve mabasa musi wa19 Chivabvu.
Dhata inotsigira zviratidzo zvinokurudzira zvekupora mumusika, nekuchengetwa kwenzvimbo dzekugara muna Kubvumbi kuchiwedzera ne6% gore negore. Kutenda nekumwe kuzorora kwezvirambidzo zvekufamba - zvinosanganisira mitemo yekumisa nharaunda uye kumiswa kwendege - pakupera kwaApril, vashanyi vakasiyana vakasiyana uye maodha echigadzirwa (vese epamba neekunze) angangoita zvakapetwa kaviri nhamba yaFebruary, apo Hong Kong yakarohwa zvakanyanya. neCOVID-19.
Pamusoro pezvo, muna Chivabvu, vasiri vagari vanokwanisa kupinda muHong Kong kekutanga mukati memakore maviri, nekushanya kwemukati kunotarisirwa kuwedzera nekuwedzera, mukuwedzera kune kukwira kwakafanotaurwa kwekugara.
Hurumende yeHong Kong iri kutarisirawo kukurudzira uye kuwedzera kushandiswa kwenzvimbo kazhinji, pamwe nechikamu chekufambisa, uye yakapa hutsva hwemavhocha ekushandisa muna Kubvumbi.
South Korea: International Flights Inotungamira Kudzoreredza
South Korea yakavhurwazve muna Kubvumbi 1, vafambi vakabayiwa zvizere vanokwanisa kupinda nekufamba vakasununguka mukati menyika pasina matanho ekuvharirwa. Zvakanaka, mirairo yemasiki yekunze iri kusimudzwa muna Chivabvu, nendege dzepasirese dzinofungidzirwa kuwedzera, zvakare. Nyika inoronga kutangazve inosvika hafu yehuwandu hwendege dzepre-denda pakupera kwegore.
FlightGlobal yakashuma 420 vhiki nevhiki nendege dzepasi rose kupinda munyika muna Kubvumbi, ingori pasi pe9% yepre-denda.
Dhata zvakare inoratidza kuti ndege dziri kutungamira kudzoreredza mumusika, ne383% gore-pa-gore kuwedzera mukubhuroka kwendege muna Kubvumbi uye kumwe kuwedzera kwe39% munguva imwe cheteyo yaKurume. Huwandu hwevashandisi vanoona zvigadzirwa zvendege kubva munaKurume 1 hwakawedzerawo neinosvika 150% gore-pa-gore.
Sezvo nyika iri kuramba ichirerutsa zvirambidzo zvayo zvekufamba kune dzimwe nyika, taona zvakare kudiwa kwekufamba kwedzimwe nyika kuchikwira panzvimbo yekambani yekuKorea. Kubhuka kwendege dzinobuda zvakapetwa katatu muna Kubvumbi, zvichienzaniswa naKukadzi; uye kubhurocha kwemahotera mhiri kwemakungwa kwakakurawo, ne60% uye 175% munaKurume naKubvumbi zvakateerana, kana tichienzaniswa naKukadzi.
Panyaya yekuenda mhiri kwemakungwa, nzira dzendege dzepasirese dzepasi rose kubva kuKorea dzaive dzekuVietnam, Philippines, US, Thailand neIndonesia, ine maguta akaita seHo Chi Minh Guta, Manila, Hanoi, Bangkok neDa Nang ari munzvimbo shanu dzepamusoro dzekutiza. nzvimbo dzevafambi vekuKorea.
Vietnam: Musika Wakasimba Wekushanya Kwemumba Yakasimbiswa neInternational Flights
Vietnam yakazarura zvakare miganhu yayo kune vafambi vepasi rose kubva munaKurume 15. Somugumisiro, nyika yakaona kudzokororwa kukuru mukushanya, nevashanyi vepasirese kuVietnam muna Kubvumbi vachisvika 101,400 vanosvika, kanopfuura kashanu kupfuura nguva yakafanana gore rapfuura. Shungu dzekufamba mudzimba dzawedzerawo. Dhata inoratidza kuti kubhuroka kwemahotera epamba munyika kwakakwira 247% gore-pa-gore zvichienzaniswa ne2021.
Kubhuka kwendege dzepasirese kwakaonawo kuwedzera kwakakura nekuda kwekurerutsirwa kwezvirambidzo, nenhamba 2022 dzinoratidza kusimudzwa kwe265% panhamba kubva muna 2021. iri munzvimbo yevanosvika kubva kunyika gumi nenhatu dzinokosha (kusanganisira Japan, South Korea, France, Spain neUK) iyo inotarisira kuenderera mberi nekukurudzira kupora.
Muna 2022, nzira dzendege dzinonyanya kufarirwa kupinda muVietnam dzinobva kuSouth Korea, Thailand, Japan, Singapore neMalaysia.
Dhata pamusoro pemamiriro azvino emusika weAsia anokurudzira, nekufarira uye kubhuka kuri kuwedzera uye kuvimba kwevatengi kuri kuwedzera. Sezvo zhizha richisvika, chirevo chakabva kuSkyscanner, zvakare Trip.com Boka sub-brand, inoratidza kuti vafambi vazhinji vekune dzimwe nyika vanoda kushandisa mari yakawanda uye kuenda mberi kuti vagadzirise kushaikwa kwekufamba panguva yedenda, nevazhinji vachifunga kumberi kwemwaka wepamusoro. uye kushanyira APAC dunhu kuzororo.
Pacific Asia Kufamba Association Speini Tairendi ushanyi Trip.com
Belfast kuenda kuGlasgow uye Exeter ndege. Nzira Itsva dze...